The itsva Chromium-yakavakirwa Microsoft Edge browser haringowanikwe chete pa Windows inoshanda sisitimu asi inowanikwa pane macOS, Android, uye iOS futi.
Nekuti iyo Edge nyowani yakavakirwa paChromium, Google Chrome browser inowedzera inotsigirwa kunze kwebhokisi, uye mazhinji eChipi maficha aripo muEdge nyowani.
Kana iwe waisa iyo Edge nyowani pane kanopfuura kamwe inotsigirwa chishandiso, ungangoda kushandisa yayo yekusimbisa ficha kuyananisa yako Edge browser data pane ako ese matanho. Ndokunge, iwe unokwanisa kuyananisa mapassword, anofarira, kero uye neruzivo rwemazita, uye zvigadziriso zvebrowser kune ako kese zvishandiso uchishandisa iyo yakafanana Microsoft account pane zvese zvishandiso zvako.
Zvakakosha kucherechedza kuti yazvino vhezheni yeEdge (vhezheni 79) haitsigire kuwiriranisa akavhurika matabhu, kuongorora nhoroondo, kuwedzeredza, uye kuunganidza.
Chikamu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kusarudza zvaunoda kuyananisa pane chinhu. Ndokunge, semuenzaniso, unogona kusarudza kuyananisa chete zvido kana ma browser browser kana uchida kuita saizvozvo.
Heano maitiro ekugonesa kana kudzima kusawiriranisa muEdge browser idzva.
Dzima sync uchiisa Edge
Kana Edge yatove yakaiswa, tarisa kunongedzo dziri muWebhu 3 (peta pasi kuti uone).
Paunenge uchiisa Edge, iwe unowana sarudzo yekuvhura / kudzima uye kugadzirisa iyo sync ficha. Heano maitiro ekuita izvozvo.
Step 1: Munguva yekuiswa kweEgege, iwe paunowana iyo inotevera skrini, tinya pane Ehe kubaya bhatani kudzima kusawiriranisa.
Kugadzirisa kusenderana, tinya pane Gadzirisa sync marongero kubatana.
Step 2: Pane dialog Sync dialog dialog, sarudza chaunoda kuyenderana uye wobva wadzvanya Shandisa bhatani. Ziva kuti sarudzo idzi dzinozocheneswa kunze kana iwe wadzima kubvumirana mune yapfuura nhanho.
Kana iwe uchida kusayina kunze kweMicrosoft account muEdge, tinya pane Buda kubatana.
Vhura sync paunenge uchiisa Edge
Step 1: Munguva yekuiswa kweEdge, iwe unowana inotevera skrini. Dzvanya pane Nyorera mu kuyananisa data bhatani.
Step 2: Nyora yako kero yeMicrosoft account kero. Dzvanya Nyorera mu bhatani. Pinda password yemakero eemail. Dzvanya Nyorera mu bhatani kuti uende mberi.
Kana iwe wagonesa maviri-nhanho kuonererwa kweMicrosoft account yako, unozofanirwa kuisa PIN iyo yaunogamuchira kune yako email kero kana nhare.
Step 3: Paunowana ichi chidzitiro, ASI tinya bhatani rinotevera. Pane kudaro, tinya Microsoft zvishandiso chete batanidza kusaina chete kune Edge browser pane kusaina-kupinda Windows 10 neyako Microsoft account.
Step 4: Tevere, iwe unowana inotevera skrini. Dzvanya pane Gadzirisa sync marongero kubatana.
Step 5: Sarudza chaunoda kuyananisa. Dzvanya Shandisa. Ndizvo!
Vhura kana kudzima sync muEdge (kubva mukati meEgege)
Shandisa aya mafambiro kana Edge yatove yakaiswa pakombuta yako.
Step 1: Kupisa Edge browser. Type kumucheto: // marongero / profiles / sync mubhokisi rekero uye warova Enter yekuvhura iyo sync peji.
Step 2: Iyo peji inoratidza "Sync iri pane" mavara ari pazasi ako Microsoft account email kero kuratidza kuti sync yakavhurwa uye inoshanda. Dzvanya pane Dzima kuwiriranisa bhatani rekudzima chimiro chacho zvizere. Kana kuti sarudza chaunoda kuyananisa.
CHERECHEDZA: Tsamba isina chinhu inoratidza kuti hauna kusaina kupinda muEdge browser. Muchiitiko ichocho, ndapota tarisa kunzira dziri muWebhu 3 yegwaro iri (peta pasi uone)
Kana sync ikadzimwa, unoona kuti "Kwete syncing" mavara. Dzvanya Vhura sync bhatani.
Vhura sync muEgege (kana isina kusaina-kuEdge nechekare)
Step 1: Mubharani yekero, mhando pamucheto: // marongero / profiles uye dzvanya bhatani re Enter kuti uvhure ma profiles peji.
Step 2: Pano, tora pane Nyorera mu bhatani parutivi rwezita rako rezita. Saina neakaunti yako yeMicrosoft nekunyora yako Microsoft account kero email uye password.
Step 3: Paunowana iyo "Sync your profile" pop, wobva wadzvanya Sync bhatani kutanga syncing!
Kuti uchinje ma sync maringe, Type Type: // marongero / profiles / sync mubhadharo yekero wobva wadzvanya Enter key. Sarudza chaunoda kuyananisa.
Nzira Yokupinda Nayo uye Kubudisa Pamusoro pe Sticky Notes In Windows 10
Kudzivirira Kuisa wega weChromium Edge In Windows 10
Maitiro Ekugadzirisa & Kugadzirisa Boot Camp Vatyairi Vanopinda Windows 10
Maitiro Ekudzivirira WPS paTP-Link Routers